Shacabka ku dhaqan Muqdisho oo ku kala qeybsan tijaabada ciidamada Itoobiya ay calan cusub uga taageen gooba ka tirsan Xamar, Tafatiraha shabakadda ugu xag jirsan dhinaca dowladda oo loo magacaabay afhayeenka madaxweynaha iyo xildhibaanada diidan joogitaanka ciidamada Itoobiya dalka Soomaaliya oo Baydhabo lagu faquuqay. Ruunkinet 26/02/07
Shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa ku kala qeybsan tijaabo ay ciidamada Itoobiya ku tijaabinayeen dareenka Soomaalida ku nool magaalada Muqdisho.
Sida ay sheegayaan warar lagu kalsoon yahay ayaa tibaaxaya in xalay ciidamada Itoobiya ay sureen goobo ka tirsan magaalada Muqdisho calan u eg kan Itoobiya oo xiddig 6 geesood ah leh loona jeedo in Soomaaliya noqotay killilka 6aad ee dalka Itoobiya.
Warka ayaa intaasi ku daraya in saakay lagu arkay calankaasi oo ka taagan fagaaraha tarbuunka, wasaaradda gaashaan dhigga iyo goobo kale.
Dad badan oo careysan ayaa isugu soo baxay saakay si ay arrintaasi uga dhiidhiyaan ayagoo ku xoomay goob laga taagay calankaasi oo ku taal fagaaraha tarbuunka si ay u soo dejiyaan.
Sidoo kale, waxaa magaalada Muqdisho lagu arkayay dad kale oo ku faraxsan in ay Soomaaliya ka mid noqoto Itoobiya.
Dadka ku nool magaalada Muqdisho ayaa maanta hadal haya warkii dhawaan ka soo yeeray wasiirkii hore ee arrimaha gudaha Xuseen Caydiid oo sheegay in Soomaaliya iyo Itoobiya ay hal baasaboor yeelan doonaan taasoo ay dad badani u arkeen in uu ka hordhacay sir ay qaar ka tirsan mas'uuliyiinta dowladda federaalka ah kula heshiiyeen dowladda Itoobiya.
Dhanka kale, wararka ka immaanaya magaalada Baydhabo ayaa ku waramaya in si gaar ah loo faquuqay xildhibaannda diidan in ay ciidamada Itoobiya joogaan dalka Soomaaliya.
Xildhibaannadan oo ay ka mid yihiin Cismaan Caato, Caasha Axmad Cabdalla iyo Boos ayaa la sheegay in si gaar ah loo ilaalinaya ayadoo loo diiday in ay galaan hoolka lagu shiraya isla markaana aflagaaddo joogta ah loo geysto.
Dhinaca kale, tafatiraha shabakadda ugu xag jirsan dhinaca dowladda ayaa loo magacaabay afhayeenka madaxweynaha.
Mudane Xuseen Idimaale oo tafatira ka ahaa shabakadda Idamaale kana mid ah jaaliyadda ku nool Ingriiska gaar ahaan magaalada Birmigham ayaa lagu tilmaami jiray tafatiraha ugu xag jiran dhinaca dowladda.
Mudane Xuseen ayaa sidoo kale la sheegay in bulshada ku nool Birmingham ay u aqoon sanaayeen shaqsi si weyn u jecel in laga aargoosto beelaha USC-da arrimo la xiriira dagaalladii sokeeye ee horay u dhacay.